Chip Quik, Inc. ဖြန့်ဖြူး | Chip Quik, Inc. အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများဖြန့်ဖြူး - Infinite-Electronic.hk
နေအိမ်လိုင်းကဒ်Chip Quik, Inc.
- Chip Quik & REG ;, Inc ကိုသစ်ကိုမူပိုင်ခွင့် Chip Quik & REG ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်၏ SMD ဖယ်ရှားရေးကိရိယာအစုံ။ လုံခြုံအနိမ့်အပူချိန်မှာ SMD ရဲ့ (မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထား devices များ) ကိုဖယ်ရှားဒီဆန်းသစ်တဲ့နည်းလမ်းပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ် rework စက်မှုလုပ်ငန်းတော်လှန်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်း၏မိတ်ဖက်ပရိုတိုအားသာချက်နှင့်အတူ chip Quik & REG ;, Adapter က, SIP Adapter ကမှ Smt နှင့် breadboards DIP မှဂဟေဆက်ငါးပိ, ဂဟေဆက်ဝါယာကြိုး, tacky flux, ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းများ, Smt ပေးထားပါတယ်။
chip Quik နှင့်ပရိုတိုအားသာချက်ယခုသင့် rework နှင့်ရှေ့ပြေးပုံစံလိုအပ်ချက်အားလုံးနှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အီလက်ထရောနစ် rework အတွက်ကျွမ်းကျင်မှု, ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရှေ့ပြေးပုံစံထုတ်ကုန်များနှင့်နည်းလမ်းများ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမှတဆင့်စက်မှုလုပ်ငန်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ပါတယ်။
ဖေါ်ပြချက်: LQFP-48 TO DIP-48 SMT ADAPTER
ဖေါ်ပြချက်: SSOP-14 TO DIP-14 SMT ADAPTER
ဖေါ်ပြချက်: DISPENSING NEEDLES / SYRINGE TIP
ဖေါ်ပြချက်: SOLDER PASTE LOW TEMP 5CC W/TIP
ဖေါ်ပြချက်: THERMALLY STABLE SOLDER PASTE NO
ဖေါ်ပြချက်: POWER STRIP 24"6BLACK OUTLET
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2232 pcs
ဖေါ်ပြချက်: VQFP-100/TQFP-100 STENCIL
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 8994 pcs
ဖေါ်ပြချက်: REMOVAL ALLOY 4.5' LEADED
ဖေါ်ပြချက်: SOIC-14 TO DIP-14 SMT ADAPTER
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 26748 pcs
ဖေါ်ပြချက်: PITCH CHANGER 2.00 MM TO 2.54 MM
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 57944 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SOLDER WIRE 62/36/2 TIN/LEAD/SIL
ဒေါင်းလုပ်: SMD3SW.020 1LB.pdf
ဖေါ်ပြချက်: DUAL ROW 1.27MM PITCH 40-PIN MAL
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4588 pcs
ဖေါ်ပြချက်: QFN-16 STENCIL
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 7020 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DUAL ROW 1.27MM PITCH 20-PIN FEM
ဖေါ်ပြချက်: 10PC DISCRETE 0603 TO 300MIL TH
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 20456 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SOLDER SPHERES SN96.5/AG3.0/CU0.
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2359 pcs
ဖေါ်ပြချက်: BGA-36 (0.4 MM PITCH,6X6GRID
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 3953 pcs
ဖေါ်ပြချက်: PLCC-28 SOCKET TO DIP-28 ADAPTER
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 6050 pcs
ဖေါ်ပြချက်: QFN-24 TO DIP-28 SMT ADAPTER
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 9198 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SLD WIRE NO-CLEAN 96.5/3/.5 4OZ.
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4446 pcs
ဒေါင်းလုပ်: SMDSWLF.031 4OZ.pdf
ဖေါ်ပြချက်: LQFP-48/TQFP-48 TO DIP-48 SMT
ဖေါ်ပြချက်: SSOP-16 TO DIP-16 SMT ADAPTER
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 26704 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DUAL ROW 1.27MM PITCH 40-PIN FEM
ဖေါ်ပြချက်: 0.1" 40 PIN RIGHT ANGLE FEMALE H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 111882 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SOLDER TIP TINNER (ACTIVATOR)
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 11175 pcs
ဖေါ်ပြချက်: LF SOLDER WIRE 99.3/0.7 TIN/COPP
ဒေါင်းလုပ်: SMD2SWLF.015 1LB.pdf
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 13776 pcs
ဖေါ်ပြချက်: LGA-10 TO DIP-10 SMT ADAPTER
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 17601 pcs
ဖေါ်ပြချက်: FLUX REMOVER (NON-FLAMMABLE) IN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 7639 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SOLDER WIRE 60/40 TIN/LEAD NO-CL
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 3404 pcs
ဒေါင်းလုပ်: SMD2SW.015 100G.pdf
ဖေါ်ပြချက်: TQFP-80/LQFP-80 TO DIP-80 SMT
ဒေါင်းလုပ်: SMD3SW.031 1LB.pdf
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4561 pcs
ဖေါ်ပြချက်: TACK FLUX 30CC W/HANDLE & TIP
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2829 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SOLDER PASTE SN42/BI58 250G
ဖေါ်ပြချက်: DUAL ROW 1.27MM PITCH 10-PIN FEM
ဖေါ်ပြချက်: SOLDER PASTE NO CLEAN SN42/BI57.
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2305 pcs
ဖေါ်ပြချက်: QFN-16 TO DIP-20 SMT ADAPTER
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 11547 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SOT23/TO-236 TO DIP-4 SMT ADAPTE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 33511 pcs
ဖေါ်ပြချက်: REMOVAL KIT FOR COMPONENTS SMD
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 6544 pcs
ဖေါ်ပြချက်: BGA-100 (0.4 MM PITCH, 10 X 10 G
ဖေါ်ပြချက်: POWERSOIC-8/PSOP-8/HSOP-8 TO DIP
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 19329 pcs
ဖေါ်ပြချက်: STENCIL 4X4MM .5MM
ဖေါ်ပြချက်: QFN-40 STENCIL
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 9081 pcs
ဖေါ်ပြချက်: MLP/DFN-6 TO DIP-6 SMT ADAPTER
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 29977 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DFN-6 TO DIP-10 SMT ADAPTER
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 21848 pcs
ဖေါ်ပြချက်: PLCC-44 SOCKET TO DIP-44 ADAPTER